Varavarana Slim Frame Glass Solle Lock Solutions - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Vahaolana malefaka varavarana fitaratra varavarana fitantanana varavarana
Miaraka amin'ny lazan'ny fomba minimalista, ny varavarana fitaratra somary manify dia mitombo hatrany hatrany eo amin'ny tsenan'ny fanatsarana trano noho ny mangarahara sy ny fahatsapana avo lenta.
Na izany aza, ny vavahady varavarana fitaratra eo an-tsena dia sarotra ny mifanentana amin'ny varavarana fitaratra manify. Amin'ny alàlan'ny fikarohana eny amin'ny tsena marobe, YALIS dia nahafantatra fa ny mpanjifa varavarana fitaratra somary lavalava dia nisedra olana toy ny firafitra anatiny tsy mendrika, ny safidy vitsivitsy ary ny fomba tsy mitovy aminy sns. Noho ireo antony ireo, ny YALIS dia manambatra ny fiasa sy ny kanto amin'ny varavarana fitaratra varavarana fitaratra sy ny varavarana fitaratra manify, mitazona ny mangarahara sy ny fahatsapana avo lenta hatramin'ny farany avo indrindra.
Ny fihoaram-pefy sy ny fitaratra fitaratra dia vita amin'ny mombamomba ny aliminioma ary ampiasain'ny milina CNC. Tsy ny maha-marina ny kojakoja amam-bika ihany no avo, fa azo atao ihany koa ny mamarana ny endrik'ireo varavarana fitaratra somary manify, mba hahafahan'ny vokatr'ireo varavarana fitaratra sy ny varavarana fitaratra vokarina mitambatra.
1. Ny firafitry ny clutch patanty dia mety manohitra ny famohana mahery setra ary manakana ny tahony tsy hirona.
2. Ny MULTIPLICITY dia ampifanarahana amin'ny hidy fametahana andriamby, afaka mampihena ny tabataba izany rehefa misokatra sy mihidy ny hidin-trano.
3. Mety amin'ny varavarana tokana-glazed ary varavarana-vera roa.
4. Ny tranga fitokonana azo ovaina dia afaka mampihena ny fahasarotana fametrahana.
Miaraka amin'ny lazan'ny varavarana fitaratra somary manify, maro ny mpanamboatra varavarana fitaratra manao ny vokatra mifanaraka amin'ny safidin'ny mpividy, nefa mandritra izany fotoana izany dia ho hitan'izy ireo fa ny fampitaovana am-baravarana dia tsy afaka mampifaninana sy mahazo tombony bebe kokoa ny vokatr'izy ireo. Noho izany, YALIS dia nanamboatra hidin-trano fitaratra varavarana fitarainana ho an'ny varavarana kely mirindra.
1. Ny GUARD dia ampifanarahina amin'ny hidin-trondro manify, ataovy mangina kokoa ny varavarana misokatra.
2. Ny akora dia mombamomba ny aliminioma, izay azo amboarina amin'ny famaranana mitovy amin'ilay rindrin'ny varavarana fitaratra.
3. Ny rosette dia azo namboarina arakaraka ny haben'ny fefy varavaram-baravarana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa.
4. Mety amin'ny varavarana tokana glazed.
A: Fantsom-baravarana fitaratra + Tanana YALIS
90mm Square Glass Splint + Varavarana YALIS
1. Ny firafitra dia metaly zinc.
2. Mety amin'ny varavaram-baravarankely fitaratra tokana sy varavarana misy valin-droa.
3. Ny safidy momba ny fiainana manokana sy ny fidirana amin'ny fidirana dia azo safidiana.
B. B Glass Splint + Tanana am-baravarana YALIS
1. Ny tora-pasika fitaratra dia misy kofehy vita amin'ny kofehy mba hisorohana ny fitaratra misy pentina.
2. Mety amin'ny varavarana tokana-glazed sy varavarana-vera roa.
3. Azo ampifanarahana amin'ny tanan'ny vavahady YALIS rehetra.
4. Ny safidy momba ny fiainana manokana sy ny fidirana amin'ny fidirana dia azo safidiana.
5. Izy io dia nifanandrify tamin'ny hidin-trano matevina tsy fantatra.